Rakotonarivo Thierry: “Tsy mbola tena matotra ny antoko politika eto” | NewsMada
Rakotonarivo Thierry: “Tsy mbola tena matotra ny antoko politika eto”
“Tsy mbola mipetraka eto Madagasikara ny hoe tena fahamatorana sy ny fipetrahan’ny antoko politika amin’ny adidy aman’andraikitra ary ny zo tokony hataony. Ny mahatonga antsika mieritreritra fa tsy tokony hirotsa-kofidina ny tsy miankina: mieritreritra isika fa manana vina mazava ny antoko politika, matotra sy manana firehan-kevitra arovana ary tsy miovaova amin’izany.”
Izay ny fanehoan-kevitry ny filoha lefitry ny Ceni, Rakotonarivo Thierry, momba ny fahamaroan’ny kandidà tsy miankina amin’izao fifidianana solombavambahoaka izao. Rehefa ny antoko politika tokoa no mandrotsaka kandidà, ho marin-toerana ny politika sy ny andrimpanjakana. “Tena izay tokoa ve ny zava-misy eto amintsika?”, hoy izy.
Tena manana firehan-kevitra mazava tokoa ve ny antoko politika eto Madagasikara? Tena voafehin’ny ao anatin’ny fipitsi-pifehezan’ny antoko ve ny mpikamban’ny antoko politika eto Madagasikara? Tena mitombina tokoa ve ireo olon’ny antoko rehefa tonga any anatin’ny andrimpanjakana? Mijanona amin’ny antoko nahavoafidy azy izy, ary tsy miovaova amin’ny vinan’ny antoko amin’izany.
Na voalazan’ny lalàna aza fa rehefa misy olom-boafidy ka voafidy amin’ny anaran’ny antoko, tsy mahazo miala amin’izany izy mandra-pahavita ny fe-potoam-piasany: tena izay ve ny zava-misy eto Madagasikara?
Aleon’ny antoko mivondrona
Ny tsy miankina aza no roa ampahatelon’ny kandidà ho solombavambahoaka tamin’ireo 2 053 nametraka antontan-taratasy, tamin’ny 2013. Na 400 000 Ar na 5 tapitrisa Ar ny anto-bola amin’ny firotsahan-kofidina ho solombavambahoaka, ny tsy miankina hatrany no betsaka.
Nomen’ny antoko politika lanja tamin’ity indray mitoraka ity ny mpifaninana. Nivondrona tao anatin’ny vondrona politika izy ireo, ary nisy vondrona politika telo aza niforona amin’izao fifidianana solombavambahoaka izao. Tsy nandeha tsirairay toy ny tamin’ny 2013 intsony izy ireo, fa mikambana…
Manaporofo izao zava-misy izao fa tsy misy ny antoko politika tena manana ny firehan-keviny mazava sy mitombina ary matotra. Misy antoko politika izay natanjaka dia natanjaka, ohatra, nefa tsy nanolotra na kandidà iray aza amin’izao fifidianana solombavambahoaka izao. Misy antoko politika tsy hita tamin’ny fifidianana filohan’ny Repoblika, nefa fahefatra amin’ny hamaroan’ny kandidà atolony amin’izao fifidianana izao.